Nbili nke Mgbasa Ozi Ekwentị | Martech Zone
Saturday, October 1, 2011 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
N'ime 1 nde iOS na gam akporo ngwaọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị! Enwere ihe kpatara anyị ji etinye oge dị ukwuu na azụmaahịa ekwentị. Ọ bụghị ọnụ ọgụgụ zuru oke, ma. Àgwà nke ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-agbanwe - anyị gụọ email anyị na ngwaọrụ mkpanaka ugbu a. Anyị na-enyocha ụlọ ọrụ ka anyị na-eche ụgbọ elu ọzọ. Anyị na-esonye na soshal midia na ọrụ geolocation kwa ụbọchị maka mkpanaka.
Dị ka mgbanwe ọ bụla na teknụzụ… anyị na-ele ka nkuchi na-eso ahịa. Microsoft Tag ejikọtala ozi ala a na ịrị elu na ọdịda nke mgbasa ozi - maa ebe uto dị? Ndị nabatara oge mbụ na-enweta nnukwu uru na ahịa snagging, ndị na-anaghị anabata azụ… ọtụtụ na-ada kpamkpam.
Cheta na: Nhoputa ndi mmadu nke Zoomerang n’izu a gbasara nke a… bu ebe nrụọrụ gi nke kacha nma?
Ntinye aka na mgbasa ozi
Mee 1, 2014 na 12: 25 PM
Mgbasa ozi ekwenti na nke ala na-enwetawanye ewu ewu. Site na ndị ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-enyocha akaụntụ ha site na ngwaọrụ mkpanaka karịa na kọmputa ha, mgbasa ozi mkpanaka na-abanye ngwa ngwa ịbụ usoro ndị mgbasa ozi si ahọrọ iji nweta ozi ha n'ihu na etiti. Ihe omuma ihe omuma a na-enye nkowa miri emi banyere mbido nke mgbasa ozi mkpanaka na nke ala na-enye amụma maka ọdịnihu.